प्रदेश २ मा पनि फोरम र एमालेको सरकार बन्ने, सरकारमा बस्ने राजपाको हैसियत छैन: उपेन्द्र यादव
नेपाल पाना प्रकाशित: २०७४-११-१९ गते | 25015 पटक हेरिएको
वाम गठबन्धनको सरकारमा संघीय समाजवादी फोरमलाई पनि सहभागि गराउने प्रयास भइरहेको छ । गृहकार्य चलिरहेको छ । निष्कर्ष निस्किएको छैन । संविधान संशोधनको मुद्दा र भागबण्डाको विषयमा छलफल भइरहेको बताइएको छ । फोरमले जस्तै संविधान संशोधनको माग पूरा भए आफूहरु पनि सरकारमा सहभागि हुन तयार रहेको राजपाका नेताहरुले बताउँदै आएका छन् । तर फोरम र वाम गठबन्धनले राजपालाई कुनै वास्ता गरेका छैनन् । किन त ? यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर ऋषि धमलाले फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग कुराकानी गरेका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
तपाईले के पाउनुभयो ? केपी ओलीमा त्यो इच्छाशक्ति छ ?
तपाईहरुबिचको बैठकमा भएको कुरा के हो त ? प्रष्ट पार्नुस् न ।
अब कोही बौलाउँछन् भने त्यसको उपचार गर्न म सक्छु र ? मैले राजपासँग कुनै लगनगाँठो बाँधेको छैन । जो सँगै घुमोस्, यसको जरुरी पनि छैन । उहाँहरुको सिद्धान्त मलाई थाहा छैन । हाम्रो सिद्धान्त र पार्टी बेग्लै हो ।
आफ्नो मुद्दा र माग सम्बोधनका लागि आफैँ पहल गर्ने हो । हाम्रो मुद्दाका बारेमा हामी छलफलमा छौँ । उहाँहरु को हो र थाहा दिनलाई ? हामी चुनावमा भाग लिदा उहाँहरुले उदण्डता देखाएको होइन । अहिले किन पछिपछि लाग्नुपर्यो ? उदण्डता र उच्छ«ंखलता मात्रै राजनीति होइन । उहाँहरुमा अनुसाशन छैन, अराजकता छ । चरम जातिवाद छ । व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा बाहेक अरु केही छैन ।
उनीहरु पनि पटकपटक सरकारमा गएको होइन ? माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा उनीहरु पनि त सरकारमा गएका थिए नि । लोकेन्द्रबहादुर चन्द, शेरबहादुर देउवाको सरकारमा पनि गएका थिए । पहिला आफ्नो अनुहार हेर्नुपर्यो नि ।
निश्चित रुपमा । म संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा होइन । त्यसैले राजपासँग अनुहार मात्रै मिल्छ, विचार र सिद्धान्त मिल्दैन ।